Ndi geoengineering bu uzo mgbapu banyere mgbanwe ihu igwe? | Network Meteorology
Enwere oru geoengineering iji emetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe. Ihe ndị a bụ ọrụ na-anwa ibelata ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka nsogbu ụwa anyị nwere na mmetụta dị iche iche nke mgbanwe ihu igwe.
Agbanyeghị, omume ndị geoengineering rụrụ na-ewelite ajụjụ gbasara ụkpụrụ omume, n'ihi na o nwere ihe egwu dị iche na ụwa. Youchọrọ ịma ihe a na-eme iji belata mmetụta nke mgbanwe ihu igwe?
1 Nchịkọta ihe
2 Usoro usoro ihe omimi
Ndị na-eme nchọpụta si gburugburu ụwa na-anwale ọtụtụ iri afọ na ụdị ọrụ a nke na-achọ ịkwado akụkụ dị iche iche nke ihu igwe na-achọ ime ma ọ bụ gbochie mmiri ozuzo na ebe ụfọdụ, jikwaa ogo ọkụ anyanwụ ma ọ bụ belata carbon dioxide na ikuku.
Ọmụmaatụ, anyanwụ geoengineering metụtara jikwaa ọnụọgụ nke ìhè anyanwụ na-abanye na mbara igwe, iji chịkwaa okpomoku dị elu ma belata okpomoku ụwa. Na ụdị nnwale, ihe omume geoengineering nwere ike ịgbanwe mmetụta nke mgbanwe ihu igwe, agbanyeghị na amabeghị ma ọ ga-enwe mmetụta.
Igwe ihu igwe ga-agbanwe ee ma ọ bụ ee, agbanyeghị, ọ ga-ekwe omume ịnwale ibelata mmetụta nke mgbanwe ihu igwe a. Nkà na ụzụ a nwere ike ịbara ọtụtụ ndị mmadụ uru ma belata nsogbu ndị ọzọ, kamakwa ndị ọzọ.
Agbanyeghị, geoengineering adịghị ebelata mkpa ọ dị iwulite sistemu ike dị ọcha karị ma duru akụ na ụba gaa na mgbanwe ike dabere na ume ọhụrụ nwere ike imeghari.
Projectsfọdụ ọrụ nke ụdị a dị na ahịa, dị ka ọ pụtara ìhè site n'eziokwu na na March 2012 Community nke Madrid ekenyela ihe ruru 120.000 euro iji rụọ ọrụ iji mee ka ọdịda mmiri ozuzo na-abawanye site na teknụzụ nke "mkpali na-achịkwa igwe ojii" ụlọ ọrụ German Radimeter Physics.
Usoro usoro ihe omimi
Ọzọ geoengineering oru ngo bụ ike sịntetik osisi ike nke jidere ma chekwaa CO2 dị ka ihe dị adị, mana jiri oke ọsọ na arụmọrụ. Enwekwara oru nke na ebuputa microcrystals n'ime mbara igwe nke mere na radieshon nke anyanwụ na-alaghachi na ịwụfu ígwè n'ime oké osimiri iji gbaa uto nke ahịhịa microscopic na-adọrọ CO2 ma dọrọ ya na ala nke oké osimiri.
Site na teknụzụ a anyị na-egwu egwu iji bụrụ Chukwu ma anyị kwesịrị ịhapụ ya ugbu a anyị bịara n'oge, ebe okike nwere oge nke ya oge niile ma anyị amaghị ihe nsonaazụ nke a nwere ike inwe na ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ndi geoengineering bu uzo mgbapu banyere mgbanwe ihu igwe?
Gini mere o jiri di na okpomoku uwa dum Nde 56 gara aga?